Yaziswa nge-OnePlus 5T nge-Snapdragon 835 kunye ne-intshi ye-6 intshi ye-AMOLED | Iindaba zeGajethi
Yaziswa nge-OnePlus 5T nge-Snapdragon 835 kunye ne-intshi ye-6 intshi ye-AMOLED
Kubonakala ngathi i-OnePlus ayifuni ukulahlekelwa ngumhlaba kolu khuphiswano lukhuphiswano kwaye ekugqibeleni iveza i-OnePlus 5T entsha, isixhobo esongeza izinto ezimbalwa ezibalulekileyo xa kuthelekiswa nohlobo lwangaphambili. Eyokuqala ngu isikrini esitsha esifikelela kwi-intshi ezi-6 isisombululo esigcweleyo se-HD + nge-18; umlinganiso wezinto ezili-9 eyenza uninzi lwayo yonke indawo engaphambili yesiphelo, okusishiya ne-OnePlus ngaphandle kwezakhelo.
Enye into ebalulekileyo ekubalulekeni kwayo ngaphandle kwamathandabuzo ukongezwa kweprosesa ye-Snapdragon 835, iprosesa esele siyazi kwinguqulelo yangaphambili kwaye ngaphandle kwamathandabuzo sisixhobo esinamandla nesisebenza ngokukuko ngokusetyenziswa kwebhetri. Kodwa ayisiyiyo yonke le nto, i-OnePlus 5T entsha yongeza utshintsho olubaluleke ngakumbi.
Ngaba yile OnePlus intsha yongeza isivamvo sobuso Oko ngokwenkampani ngokwayo ichonga ukuya kuthi ga kumanqaku ahlukeneyo e-100 yobuso bethu, ukongeza kumfundi oqhelekileyo weminwe, into engakhange iqatshelwe kwinkcazo-ntetho. Kule meko, imodeli entsha yenkampani yaseTshayina ifaka ikhamera engasemva kabini, enye ye-16 enye ye-20mp ene-f / 1.7. Awungekhe uphoswe ngumaleko wokwenza ngokwezifiso i-OxgenOS ngokusekwe kuhlobo lwe-Android 7.1, kodwa sele beqinisekisile ukuba iyakufumana i-Android Oreo kwiinyanga ezizayo (ezinokuthi zibe ngu-2018). Kunye nezi nkcukacha zemodeli entsha yongeza:
Igrafu yokucoca i-540
Ikhamera yangaphambili ye-megapixel eyi-16 ene-f / 2.0 ukuvula
I-6 okanye i-8GB ye-RAM
I-64 okanye i-128 GB yokugcina yangaphakathi
3.300mAh ibhetri kunye nentlawulo ekhawulezayo
Ukunxibelelana: I-Bluetooth 5.0, iWi-Fi 802.11ac, i-NFC, i-LTE ukuya kwi-UL Cat 13 kunye ne-DL CAT 12
Le OnePlus 5T intsha ayinamanzi kwaye leyo yingongoma yokugcina engqondweni. Kwiinyanga ezintlanu emva kokubeka i-OnePlus 5 kwintengiso, inkampani ekhokelwa nguCarl Pei, ishiya ingxelo ephuculweyo etafileni Ixabiso lokuqala lokuqaliswa kwee-euro ezingama-499. Kule meko, iya kuqala ukuthengiswa ukuqala ngo-Novemba 21 ozayo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » Umnxeba » Iiselfowuni » Yaziswa nge-OnePlus 5T nge-Snapdragon 835 kunye ne-intshi ye-6 intshi ye-AMOLED